Audio Recorder: အသံဖမ်းယူပြီး podcasts တွေကိုပြုလုပ်ရန်အသုံးချပရိုဂရမ်။ Linux မှ
Audio Recorder - အသံဖမ်းယူပြီး podcasts တွေကိုပြုလုပ်ရန်အသုံးချပရိုဂရမ်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအင်တာနက်ကိုရှာဖွေခြင်းaအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အက်ပ် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြတ်ပြီးလာတဲ့ podcast သေးငယ်အောင်လုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောအသံကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် အသုံးဝင်သောအသေးစားနှင့်ရိုးရှင်း app ကိုခေါ် အသံ Recorder.
လူအများကငြင်းခုံကြလိမ့်မည်၊ ၎င်းနယ်ပယ်ရှိ Linux အတွက်ဘာမှပိုကောင်းမည်မဟုတ်ပါ Audacity။ Audacity ဟာလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုသာမက၊ မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသံများကိုအသံသွင်းယူနိုင် (အသံ)။ ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်အသံဖမ်းခြင်း၊ တိပ်ခွေများနှင့် discs များကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ အသံဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ အမြန်နှုန်းသို့မဟုတ်အသံအနိမ့်အမြင့်ပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခုခုရှာနေခဲ့သည် ဒီထက်ရှုပ်ထွေးပြီးပိုမိုပေါ့ပါးပြီးတော့အဲဒါကိုပေးတယ် အသံ Recorder.
နှင့်ပတ်သက် Audacityနှင့်ဆက်စပ်သောအခြား application များ မာလ်တီမီဒီယာလယ်ပြင်အထူးအသံအသံထုတ်လွှင့်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ကျမည်မဟုတ်ပါ ယခင်ဆက်စပ် post အောက်ပါ:
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သာကိုးကားပါလိမ့်မယ် Audacity အစားထိုး အဲဒီမှာလက်တွေ့ကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့:
Audio Recorder: Open Source Multimedia App
1 Audio Recorder: Open Source Multimedia App
1.1 Audio Recorder ဆိုတာဘာလဲ။
Audio Recorder ဆိုတာဘာလဲ။
ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျသောစကားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သည် အသံ Recorder အဖြစ်:
"ကွန်ပျူတာထဲမှာအသံ (အသံ) တွေကိုအသံသွင်းနိုင်တဲ့အံ့သြဖွယ်အစီအစဉ်။ ဤကိရိယာသည်အသုံးပြုသူကိုမိုက်ကရိုဖုန်း၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာ၊ အသံကဒ်များအပြင်မာလ်တီမီဒီယာပလေယာများသို့မဟုတ်အင်တာနက်ဘရောင်ဇာများကဲ့သို့သောကိရိယာများမှအသံဖိုင်များကိုအခြားသူများအကြားမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။".
အသံ Recorder လက်ရှိတွင်တရားဝင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၂ ခုရှိသည် Launchpad။ အ ပဌမ များအတွက်ဗားရှင်းကနေအများဆုံးခေတ်သစ် executable ပါဝင်သည် Ubuntu 20.04 (ဆုံချက်) ရရှိနိုင်ပါသည်အထိ Ubuntu 15.04 (Vivid)။ ပြီးနောက် ဒုတိယ ၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းများအတွက်ရရှိနိုင်သော executable များပါဝင်သည် Ubuntu 15.04 (Vivid) ထ Ubuntu 10.10 (Maverick).
၎င်းတို့တွင်ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်းကိုထပ်ဆောင်းခြင်းမှတဆင့်ရရှိနိုင်သည် PPA repository ကိုသို့သော်ထိုသို့အများအပြားဖြစ်နိုင်သည် GNU / Linux Distros package ကိုတွေ့ပြီး၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော command ဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည် console ကိုအထုပ်မန်နေဂျာ o software စင်တာ တစ် ဦး ဂရပ်ဖစ်တပ်ဆင်ဘို့။
ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စမှာကတည်းကငါအသုံးပြုသည် MX Linux ကို 19.2 (အထူးသဖြင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးကိုယ်ပိုင် respin ခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရိုးရှင်းသော command ဖြင့်အဓိကရှုပ်ထွေးမှုများမရှိပဲထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။
အထက်ပါနှင့်အောက်ပုံ၏ပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ graphical user interface (GUI) de အသံ Recorder နှင့် ဖွဲ့စည်းမှုအပိုင်း ၎င်းသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော်၊ ဤသေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းသောမာလ်တီမီဒီယာ application ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည်အောက်ပါတို့ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
ဗဟိုအပိုင်း ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိရန်စာသားမှတစ်ဆင့် Programmable Timer ကို အသုံးပြု၍ - စတင်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းသို့မဟုတ်အချိန်ကာလတစ်ခုအကြာတွင်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အောက်ပိုင်းအပိုင်း Audio Configuration အတွက်အသံ (HW / SW) ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော၎င်းကိုမှတ်တမ်းတင်မည့် ဦး တည်ရာပုံစံဖြစ်သည့်လျှောက်လွှာကိုသင်ပြောပြနိုင်သည်။
အောက်ခြေခလုတ်တစ်ခု လျှောက်လွှာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်များစွာသော parameters များကိုရယူရန်ခွင့်ပြုသည့်အပိုထပ်ဆောင်း Configuration ။ အဘယ်သူ၏ရွေးချယ်မှုများကိုချက်ချင်းအောက်ပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
သင်တန်ဖိုးထားနိုင်သကဲ့သို့ အသံ Recorder ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်အရည်အသွေးမြင့်သောအသံတည်းဖြတ်မှုလိုအပ်သည် Audacityသေးငယ်တဲ့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်အကိုင်များအတွက် podcast တခုကို ဒါဟာအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" မာလ်တီမီဒီယာ application အကြောင်း «Audio Recorder»အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအသုံး ၀ င်သော၎င်း၏နယ်ပယ်အတော်များများတွင်ရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည် အသံအသံသွင်း မည်သည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆိုရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ပါ podcast တခုကို; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Audio Recorder - အသံဖမ်းယူပြီး podcasts တွေကိုပြုလုပ်ရန်အသုံးချပရိုဂရမ်
PowerDNS Recursor 4.4 ကိုဖြန့်ချိပြီးပါပြီ
Node.js 15.0 သည် NPM, V8 နှင့်အခြားအရာများသို့မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူရောက်ရှိသည်